‘Fiarovana fa tsy ny zo iombonana ve’ ? Voaràra ny jono ao Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Efa ela nanoherana ireny fandraràna ireny ireo mpanjono ao an-toerana
Voadika ny 01 Jona 2019 16:22 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, 日本語, Ελληνικά, English
Jono nentindrazana ao Bangladesh. Sary tao amin'ny Wikipédia, an'i Michael Foley, Banky Iraisampirenena CC BY 3.0
Vao avy napetraky ny governemanta ao Bangladesh ny fandraràna izay rehetra mety ho endrika fanjonoana an-dranomasina, manomboka ny 30 May hatramin'ny 23 Jolay 2019 mba hiantohana ny fahasalamana sy ny fihavaozana maharitra amin'ny tahirin-trondro. Ny mpiandry sisintany sy ny tafika an-dranomasina no hisafo ny hoalan'i Bengale mba ho fampiharana ilay fandraràna. Saingy tena kapoka mafy ity fanapahankevitra ity ho an'ireo vohitra fonenan'ny mpanjono, izay ny ankamaroany dia miankina amin'io asa io ny fivelomany. Na nampanantena aza ny fanjakana fa hanome solontsakafo isambolana ho an'ireo mpanjono voadona amin'izany, nataon'izy ireo izay handrenesana ny tsy hafaliana sy ireo fahasahiranana miandry azy ireo ato anatin'ireo volana roa ho avy.
Ny jono ao Bangladesh
Ara-pomban-drazana, miantehitra amin'ny jono i Bangladesh mba hamelomana ireo vahoaka ao aminy izay vinavinaina ho 163 tapitrisa eo ho eo. Mihoatra ny 60 % amin'ny proteina azo avy amin'ny biby ao anatin'ny sakafo ao Bangladesh no avy amin'ny trondro. Manana fari-pihariana ara-toekarena voatokana io firenena io, mirefy 106.000 km2, ao amin'ny hoalan'i Bengale, izay manome ny 73 % amin'ny velarantany an-tanety sy an-dranomasina ao amin'ny firenena. Misy karazana trondro eo amin'ny 475 eo, makamba 36, foza 15 ary 301 ireo karazana akorandriaka sy tekateka ao amin'ny hoalan'i Bengale ; an-jatony ireo karazana trondro jonoina ho an'ny tsenam-barotra. Vinavinaina ho roa tapitrisa eo no isan'ireo mpanjono miasa ao anatin'ny sehatry ny jono sy ny fiompiana trondro. Antsasaky ny iray tapitrisa no miasa amin'ny jono mahazo tombontsoa sy mivelona amin'ny faritry ny morontsiraka.
Ny foiben'ny tsenan'ny trondro ao Sylhet, Bangladesh. Sary tao amin'ny Flickr an'i David Stanley. CC BY 2.0
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, nanomboka nitontongana ny tahirina trondro erantany noho ny fanjonoana tafahoatra sy ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro. Tsy afa-miala amin'izany i Bangladesh. Tato anatin'ny taona vitsivitsy, napetraka any aminà faritra voafetra ny fandraràna mandritra ny fotoana fohy ny fanaovana jono mitodika ho amin'ny tsenam-barotra, saingy izao no voalohany andraràna ireo sambo mpanjono rehetra tsy hivoaka ny seranana mandritra ny fotoana lavalava. Voakasika amin'izany ihany koa ireo mpanjono ao an-toerana izay miasa eny amin'ny renirano sy ny ranomasina. Nambaran'ireo manampahefana fa apetraka sy ho ampiharina maharitra mandritra ireo taona maro ho avy ity fandraràna ity, fotoana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fotoana fanatodiazana na fiterahan'ny trondro, mba hanabontsinana indray ny tahirin-trondro.
Nilaza tamin'ny mpanao gazety ny minisi-panjakàna misahana ny jono sy ny fiompiana, Ashraf Ali Khan Khasru fa:
Rehefa tsy ampiasaintsika amin'ny fomba maharitra ireny loharanon-karena ireny dia ho fongana indray andro any. Tsy maintsy omena fotoana ny trondro mba hahalehibe azy sy hahafahany mitombo taranaka. Raha tsy izany, dia hijaly isika amin'ny hoavy.
Tamin'ny Oktobra 2018, noraràn'ny governemanta ny fanjonoana nanerana ny firenena ny alose hilsa, nandritra ny 22 andro, mba hahafahan'ny trondro manatody sy mifindra toerana ao amin'ny hoalan'i Bengale mankany amin'ireo dobo sy renirano ao Meghna ary ireo renirano hafa. Ny angondrakitry ny WorldFish tany amin'ireo toerana masina ho an'ny alose hilsa dia nampiseho fa ny fitambaramben'ireo trondro azo tamin'io karazany io dia nitombo 28 %, avy any amin'ny 387.211 ho 496.417 taonina nandritra ny fotoam-panjonoana 2015 sy 2016 noho ny fisian'ny fandraràna nitovy tamin'io.
Tamin'ny Martsa 2019, nametraka fandraràna jono mandritra ny 60 andro ny governemanta, ho an'ny karazany rehetra ao Padma, Meghna sy ireo sakelika mifampiankina amin'izy ireo any amin'ireo faritra samihafa ao Chandpur, Bhola ary Lakshmipur. Fandraràna iray mitatra ho telo volana ao amin'ny farihy Kaptai, ilay farihy voatrolombelona lehibe indrindra ao Bangladesh.
‘Fiarovana fa tsy ny zo iombonana’
Ny safidy mahasanganehana hatrizay momba ny fitsipiky ny fiarovana, raha ampitahaina amin'ny zo iombonan'ny fiarahamonina : mandefa andiana sambo mitety ny renirano Khakdhon, distrika amorontsiraka ao Barguna, ireo mpanjono sy mpivarotra trondro mitaky ny fanesorana tanteraka ilay fandraràna mandritra ny 65 andro tsy fakàna amin'ny harato ireo hilsas.
Hatry ny ela ireo fikambanan'ny mpanjono ao an-toerana no efa nanohitra ireny fandraràna ireny. Ataon-dry zareo koa izany ankehitriny amin'ilay fandraràna misy amin'izao fotoana izao, amin'ny fanehoana ny hatezeran-dry zareo amin'ny alàlan'ny filaharana sy fifamoriana eny an-dalambe any amin'ireo faritra amorontsiraka. Araka ny lazain'ny fikambanan'ireo tompona sambo fanjonoana ao Bangladesh (teny anglisy nafohezina hoe BFBOA), marobe ireo mpanjono madinika miasa isanandro no voatery mitrosa, raha tsy izany tsy mihinana ny ankohonany raha tsy misy fanonerana ataon'ny mpitantana.
Nanokana vary 36.000 taonina ny fanjakana mba hozaraina any amin'ireo vohitra voakasika amin'izany, ary miomana ny hanolotra fatram-bary 40 kg isambolana ho anà mpanjono miisa 414.784 sy ny ankohoanìizy ireo any aminà distrika 12, Ireo mpanjono kosa etsy ankilany dia nampahatsiahy an'ireo tomponandraikitra fa tsy ampy hamelomana araka ny tokony ho izy ny fianakavian-dry zareo raha izay fanomezana karazan-tsakafo tokana monja.
Anwar Hossain Sikder, mpikambana no sady mpitantsoratry ny BFBOA, manampy fa homen'ilay fandraràna tombon-dahiny tsy araka ny tokony ho izy ireo orinasa misahana fanjonoana avy amin'ireo firenena mpiray vodirindrina :
Ilay fandraràna tsy hahazo manjono any amin'ny halavirana 370 km miala ny morona dia tsy hanao afa-tsy ny hanome tombon-dahiny an'ireo mpivarotra sy mpanjono avy any India sy Myanmar.
Any anaty media sosialy, omen'ireo mpisera laharam-pahamehana ny fiarovana, raha ny hafa indray kosa manipika ny ilàna ny fitsinjovana ny velontena isanandron'ireo mpanjono tra-pahasahirànana. Ilay matihanina amin'ny resaka teknolojiam-pifandraisana sy fampitambaovao, Asif Saif Uddin, niantso ho amin'ny famoronana asa fanolo ho an'ireo mpanjono nafindra toerana :
Fanapahankevitra iray tsara. Saingy tokony hisy hetsika atao mba hamoronana asa fanolo ho an'ireo mpanjono voakasik'izany
Ilay Bangla mpila ravinahitra Md Osman Ghani manoratra ao amin'ny Facebook mikasika ny fanonerana ireo mpanjono :
Hamafisin'ny governemanta fa ilay fandraràna ny jono (mandritra ny vanimpotoana fanatodizana) dia hampitombo ny tahirin-trondro.
Ary raha sanatria ka diso izany ?
Hahazo onitra ve ireo mpanjono mahantra ?
Mampihatra fandraràna tsy hiasa amin'ireo mahantra ianareo amin'ny fitenenana an-dry zareo hoe hitombo ny fidirambolany any aoriana.
Raha tsy tanteraka izany, iza no hotànana ho tomponandraikitra ?
Marobe ireo fanehoankevitra naneho ahiahy tahaka izany momba ny fametrahana ireo fepetra fanohanana an'ireo izay mivelona amin'ny jono :
Tsy ekeko ilay fandraràna vonjimaika ny jono ataon'i Bangladesh satria ny mahantra ihany no hangirifiry amin'io.
Kanefa, tsy ireo izay niteraka ny firodanana erantanin'ny tsena / tsy fahombiazana ara-drafitra, tsy ry zareo ireny velively no hikaroka vahaolana, na tsara io na ratsy. Fa mbola ireo izay idonany hatrany hatrany no mitondra fiovàna.
Ny olana, ahoana no fomba ataon'ny governemanta, mandritra ilay fandraràna, mba hanohanana ireo izay mivelona amin'ny jono. Tsy vita ny hanavotra ny iray ka hamela ny iray, na samy ho rendrika izy roa any am-parany any. Ary tsy hanavotra ihany koa ny fiarovana iray. – Mandrara ny jono mandritra ny 65 andro i Bangladesh mba hanavotana ny trondro.
4 ora izayIndia